Wariyayaasha dibad-jooga ah oo soo dhaweeyay kala diristii golaha saxaafadda Qaranka. – Radio Daljir
Wariyayaasha dibad-jooga ah oo soo dhaweeyay kala diristii golaha saxaafadda Qaranka.
Maajo 7, 2009 12:00 b 0
Nairobi, May 06 | Guddiga wariyaasha soomaaliyeed ee dibad-jooga ah ayaa soo dhaweyay kala diristii u dhawaan wasiirka warfaafinta dawlada Somaliya ku sameyay golaha saxaafadda qaranka. Shir jaraa’id uu ku qabtay magalada Nairobi ee wadanka Kenya xiriiriyaha guud ee guddiga wariyasha Somaliya Maxamed C/Nuur Sacudi ayee ku sheegayn in kala dirista golaha saxaafadda qaranka ay timid xilli loo baahnaa maadama xilligan ay muhiim tahay in la sameyo golle saxafadeed oo si dhab ah ula jaan qaadi kara xaaladaha adag ee saxafada haysta.
“Waxaan codsanaynaa in lasameyo golle saxaafada qaranka ay leehyihiin oo ay ka dhex muuqdaan dhamaan saxafada Somaliya, kuwaas oo saxafiyinta iyo saxafada si hufan ugu adeega” ayuu yiri Maxamed C/Nuur Sacudi.
Xiriiriyaha guud ee wariyasha dibad jooga Maxamed Sacudi waxa uu xusay inay xilligan jiran dhibaatoyin lagu hayo saxafada Somaliya ayna tahay inay ka dhiidhiyaan, taas oo ka jiiftayn ama waxba ka qaban golaha saxafada qaran.
“Wallow ay muddo yar dhisnayeen Golaha saxafada qaran, adane howlo badan oo qabtayn ma jirin, waana loo baahan yahay inuu is badal dhaco” ayuu hadalkiisa raaciyay Maxamed Sacudi.
“Wasiirka warfaafinta waxa aan ka codsanaynaa in dhismaha golaha cusub ee saxafada Qaranka ay noqoto mid ay dhamaan saxafiyinta Somalida wax u qabata”.
Ugu danbeyntii Maxamed C/Nuur Sacudi ayaa ugu hambalyeeyay wasiirka warfaafinta dowlada cusub Farxaan Ali Gaben howsha baraaran ee saxafada Somaliya u qabanayo.
Maxamed C/Nuur Maxamed “Sacudi”
Wafti uu hogaainayo C/rashiid Cirro, wasiirka ganacsiga dawlada federaalka ah ee Somaliya oo booqasho ku yimid Puntland.